बाघ बाँचे जोगिन्छ वन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
बाघ बाँचे जोगिन्छ वन
‘बाघको संख्या बढेर मान्छेमाथि आक्रमण भएको होइन, बस्तीमा छिरेर बाघले घटना निम्त्याएको छैन । बरु जंगल क्षेत्रमा मानवीय क्रियाकलाप बढेको पुष्टि हुन्छ ।’
श्रावण १४, २०७८ अब्दुल्लाह मियाँ
काठमाडौँ — बाघलाई ‘अम्ब्रेला स्पेसिज’ मान्छन् संरक्षणकर्मी । जहाँ बाघ हुन्छन्, त्यहाँ वन हुन्छ, उसका आहारा प्रजातिका घाँस खाने जनावर हुन्छन् । ती बाँच्न पानी र घाँस चाहिन्छ । र, जहाँ हुन्छन्, त्यहाँ जैविक विविधता हुन्छ । त्यसैले बाघ बाँचे छाताजसरी सुरक्षा हुन्छ, वन्य जीवन जोगिन्छ भन्छन् विज्ञहरू । तर, बाघले मान्छेलाई बाँकी राख्छ ? बाघले किन लिइरहेको छ त मान्छेको ज्यान ? ‘बाघले सितिमिति मान्छेलाई आक्रमण गर्दैन ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग पार गर्दै पाटे बाघ । फाइल तस्बिर : सन्जीव पुन/जेडएसएल
बच्चासँगै भएको पोथी बाघ, पोथी र भालेबीच संसर्गको अवस्था, बूढो र सिकार गर्न अशक्त तथा आफ्नो क्षेत्र बनाउने क्रममा भाले–भाले बीच लडाइँ हुँदा कमजोर भएको बाघ बढ्ता आक्रामक हुन्छ,’ बाघविज्ञ झमक कार्कीले भने, ‘मानसिक रूपमा समस्यामा भएको बाघले पनि मानिसलाई आक्रमण गर्छ ।’संसारका १३ मुलुकमा मात्रै बाघ पाइन्छ । संख्या घटेपछि संरक्षणको चासो बढ्यो ।
बाघ बढेका क्षेत्रमा भने नयाँ समस्या छन् । मान्छेलाई बाघ र बाघलाई मान्छेबाट जोगाउने व्यवस्थापन जटिल भएको छ । बर्दिया निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बाघको आक्रमणबाट ६ जनाको मृत्यु भएको थियो । आर्थिक वर्ष ७७/७८ मा त्यो संख्या ठ्याक्कै दोब्बर अर्थात् १२ जनाको ज्यान गयो । त्यसअघिका वर्षमा यति ठूलो संख्यामा घटना भएको थिएन । बर्दियामा साउन पहिलो साता बाघको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ । करिब दुई वर्षमा बर्दियामा १९ जना र सँगै जोडिएको बाँके निकुञ्जमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । गत आव ०७७/७८ मा चितवन निकुञ्जमा भने बाघ र गैंडाको आक्रमणमा मारिएकाको संख्या ५/५ छ । आव ०७६/७७ मा भने बाघ र गैंडासहितका वन्यजन्तुको आक्रमणबाट निकुञ्जभित्र र ८ जना मारिएका छन् ।
बाघसहितका वन्यजन्तुको आक्रमण बढेपछि सरकारले त्यस्ता वन्यजन्तुलाई नियन्त्रण गरेर राख्ने रेस्क्यु केन्द्र बनाउन जोड दिएको छ । इकोलोजिस्ट हरिभद्र आचार्यका अनुसार चितवनको देवनगर, बर्दियाको रम्भापुर, पोखरा र भक्तपुरमा आक्रमण गर्न पल्किएका वन्यजन्तु राख्न रेस्क्यु केन्द्र बनिरहेका छन् ।
बर्दियामा गत आवमा मान्छेमाथि पटक–पटक आक्रमण गर्ने ४ वटा बाघलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । तीमध्ये निकुञ्जले एउटालाई जावलाखेल चिडियाखाना, २ वटा निकुञ्जकै मुख्यालय ठाकुरद्वाराको रेस्क्यु सेन्टर र एउटालाई बाँके निकुञ्ज, ओभरीमा पठाएको थियो । मानव–बाघ द्वन्द्व ह्वात्तै बढेपछि न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन रणनीतिक योजना बनाइएको अधिकृत श्रेष्ठ बताउँछन् । बर्दियामा बाघका आक्रमणका घटना सबै निकुञ्जभित्रको जंगल र आसपासमा भएको देखिन्छ । ‘बाघको संख्या बढेर घटना भएको होइन,’ उनले भने, ‘बस्तीमा छिरेर बाघले घटना निम्त्याएको छैन, बरु जंगल क्षेत्रमा मानवीय क्रियाकलाप बढेको पुष्टि हुन्छ ।’
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी अध्यक्ष भारती पाठक बाघलगायतका वन्यजन्तु जोगाउन समुदायको प्रत्यक्ष भूमिका रहे पनि समुदाय जोगाउने कार्यक्रममा राज्यले ध्यान नदिएको गुनासो गर्छिन् । ‘जनतालाई कसरी सुरक्षित गर्ने र उनीहरूलाई कसरी सबल बनाउने भन्नेतिर फोकस हुनुपर्‍यो,’ उनले भनिन् । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र घाइतेलाई उपचार गर्ने व्यवस्था भए पनि मान्छेको ज्यान जोगाउनुपर्छ भन्नेमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताइन् ।
आक्रमणका घटना बढ्दा निकुञ्जले बाघ नियन्त्रणमा लिने र त्यस्तालाई अनुगमन गर्न घाँटीमा स्याटेलाइट कलर जडान गर्ने गरेको छ । सामान्यतः दुई पटकभन्दा बढी मान्छेलाई आक्रमण गर्ने बाघलाई समस्याग्रस्त रूपमा लिने गरिन्छ । अर्का बाघविज्ञ चिरञ्जीवी पोखरेल प्रविधिको विकासले समस्याग्रस्त बाघको पहिचान गर्न र उसको मुभमेन्ट हेर्न सहज भएको बताउँछन् ।
अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार एउटा भाले बाघको विचरण क्षेत्रमा सरदर तीनवटा बघिनी हुन्छन् । एउटै बासस्थानमा भालेले अर्को भालेको उपस्थिति रुचाउँदैन । एउटा वयस्क बघिनीले २–२ वर्षमा एकपटकमा २ देखि ३ वटा डमरु जन्माउँछ । ३ देखि ४ वर्षको भएपछि बघिनी प्रजननयोग्य हुन्छन् ।
अर्का अनुसन्धानकर्ता सिभिस भण्डारी सहवासका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदा बाघ जुधेर मर्ने घटना प्राकृतिक चक्र भएको बताउँछन् । ‘धेरैवटा बाघले एउटै बघिनीसँग सहवास गर्न चाहेका हुन्छन्, त्यस्तो बेलामा बलियोले मात्र त्यो चाहना पूरा गर्न सक्छन्,’ उनी भन्छन् । लडाइँमा हारेको बाघ नयाँ ठाउँ जान्छ ।
फाइल तस्बिर : सन्जीव पुन/जेडएसएल
करिब एक शताब्दीअघिसम्म १ लाखको हाराहारीमा रहेका पाटेबाघको संख्या ३ हजार २ सयमा सीमित भएपछि सन् २०१० मा बाघ पाइने १३ देशका राष्ट्र प्रमुखको रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको भेलाले सन् २०२२ सम्म बाघको संख्या दोब्बर (६,५००) बनाउने घोषणा गरेको थियो । उक्त लक्ष्य करिब पूरा हुने संघारमा छ । बाघ बढेसँगै मान्छेसँगको द्वन्द्व पनि वृद्धि भएको हो । नेपालसहित धेरैजसो मुलुकमा यो १० वर्षको बीचमा बाघको संख्यामा उल्लेख्य बढोत्तरी भएको छ । संख्या बढाउन आहार प्रजाति बढाउने, बासस्थान विस्तार गर्ने, अवैध चोरी–सिकार र व्यापार रोक्ने मुख्य संकल्प थियो ।
पिटर्सबर्गमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले दोब्बर पार्ने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा बाघको संख्या १ सय २१ थियो । ३ वर्षअघि सन् २०१८ को गणनाले नै नेपालमा बाघको संख्या २ सय ३५ पुगेको देखाइसकेको छ । सरकारले अब सन् २०२२ को सुरुवातमै बाघ गणना गर्दै छ । योपटक संख्या थप बढ्ने सरकारी अधिकारी र प्राविधिकले अपेक्षा गरेका छन् । बाघ पारिस्थितिकीय प्रणाली सन्तुलनको सूचक भएकाले यसको बचाउका लागि विश्व समुदाय जुटेका हुन् ।
बाघ बढे सँगसँगै चुनौतीसमेत थपिएको महसुस हुन थालेको छ । त्यसैले बाघ संरक्षण र द्वन्द्व न्यूनीकरणमा काम गर्न नेपाल सरकारले ‘बाघ संरक्षण विशेष कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । साउन २ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा भएको राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिको सातौं बैठकले हरेक वर्ष १५ करोड रुपैयाँ खर्चने गरी विशेष कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
बाघले निम्त्याएका समस्याबारे सर्वत्र चर्चा भइरहेका बेला समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पिटर्सबर्गको सम्मेलनमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र त्यो बेलाका वनमन्त्री दीपक बोहरा बाघबारेको बहसमा बिहीबार सँगै एकै मञ्चमा सहभागी हुँदै छन् । ‘बाघका लागि निकुञ्ज–आरक्षबाहिर पनि बासस्थान विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारीसमेत रहेका इकोलोजिस्ट आचार्यले भने, ‘अर्को भनेको द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा सहअस्तित्व कायम गर्नु नै हो ।’ सन् २०१८ को गणनाअनुसार चितवन निकुञ्जमा ९३ र बर्दिया निकुञ्जमा ८७ बाघ छन् । तर, लगातार दुइटा आर्थिक वर्षमा हेर्ने हो भने बाघले निम्त्याएका घटना बर्दियामा बढी छन् ।
बाघ रहेका निकुञ्जमध्ये कुनले कति बाघ थेग्न सक्छन् भनेर अध्ययन गरिएको छ । पहिलो चरणमा चितवन र पर्सा निकुञ्ज (चितवन–पर्सा कम्प्लेक्स) मा त्यस्तो अध्ययन पूरा भएको छ । उक्त अध्ययनले चितवन र पर्सामा १ सय ७५ वयस्क बाघ थेग्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
अहिले चितवनमा ९३ र पर्सामा १८ गरी १ सय ११ वयस्क बाघ छन् । चितवन निकुञ्जले १ सय ३६ र पर्सा निकुञ्जले ३९ वटा बाघ थेग्न सक्छन् । निकुञ्ज विभागले दुई वर्ष लगाएर अध्ययन गरेको हो । सन् २०१८ को गणनाअनुसार चितवन–पर्सासहित बर्दिया, बाँके र शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा गरी २ सय ३५ वयस्क बाघ छन् । बाघको संख्या बढाउन सरकारले सन् २००९ मा बाँके निकुञ्ज घोषणा गरेको थियो भने पर्सा निकुञ्ज विस्तारसमेत गरेको छ । सँगै पर्सा निकुञ्जको भित्रको बस्ती सारेको थियो ।
प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ ०६:५३
श्रावण १०, २०७८ अब्दुल्लाह मियाँ
काठमाडौँ — असार दोस्रो साता भर्चुअल भएको वार्डेन सम्मेलनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) अणनाथ बरालले निकुञ्जको ब्रिफिङ गर्ने क्रममा सेनाले समन्वय नगरेको आरोप लगाएका थिए ।
उनको भनाइलाई तत्कालै सेनाको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी (जर्नेल) हिमांशु खड्काले खण्डन गरेका थिए । सम्मेलन सकियो, तर त्यसमा सहभागीलाई प्रस्ट भयो निकुञ्ज प्रमुख र सेनाबीच समस्या छ ।
विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले छानबिन गर्न सहसचिव धनञ्जय पौडेलको संयोजकत्वमा टोली बनाएका थिए । निकुञ्ज प्रमुख बराल र सुरक्षार्थ तैनाथ सेनाको खड्ग दल गणका गणपति सुधीर केसीको आपसी टकरावले निकुञ्ज व्यवस्थापनमा समस्या आएको टोलीको निष्कर्ष छ । दुई बीच ‘जुँगाको लडाइँ’ ले गस्तीदेखि निकुञ्जसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा सहकार्य नदेखिएको ठहर गरेको स्रोतले जनाएको हो । १५ दिनको समयावधि पाएको टोली निकुञ्जको अध्ययनपछि दुई दिनअघि फर्किएर अहिले प्रतिवेदन तयार पार्दै छ । संयोजक पौडेलले अर्को साता प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउने जानकारी दिए ।
स्रोतले भन्यो, ‘सेनालाई निकुञ्जको सुरक्षा गर्ने हिसाबले मात्र खटाइएको हुन्छ । तर, सेक्युरिटीबाहेकका प्राविधिक विषयहरूका साथै निकुञ्जको दायरामा पर्ने काममा पनि सेनाले चासो राखेपछि टकराव बढेको रहेछ ।’ सेनाको खड्ग दल गण ६ महिनाअघि चितवन निकुञ्ज गएको हो । बराल भने गत वर्षको साउनमा बर्दिया निकुञ्जबाट चितवनको चिफ वार्डेनमा सरुवा भएका हुन् । सेनाको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु निर्देशनालयले हरेक दुई वर्षमा गण सरुवा गर्छ । गणपति केसी साउन १० मा गणबाट सरुवा हुँदै छन् ।
आफूमातहतको काममा समेत सेनाले चासो राखेपछि वार्डेन बराल सुरुदेखि नै सेनासँग रुष्ट थिए । सेनाले निकुञ्जभित्रको मध्यवर्ती क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा भएको ठेक्कामा समेत वार्डेनले ‘चलखेल’ गरेको आरोप लगाएको थियो तर त्यो विषयमा टोलीले ‘फिल्डमा त्यस्तो समस्या नदेखिएको’ बुझेको छ । ‘निकुञ्ज र सेनाबीच सम्वन्ध टुटेको छ । त्यसमा सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ,’ टोली स्रोतले भन्यो, ‘त्यो हुन सक्यो भने मात्र निकुञ्जका समस्या समाधान हुन्छन् ।’ निकुञ्ज–सेनाको टकरावको फाइदा गलत समूहले उठाउन सक्ने टोलीको ठहर छ । निकुञ्जका वन्यजन्तु जोगाउन निकुञ्ज–सेना दुवैको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । निकुञ्जमा सुरक्षाथ्रेट जहिल्यै छ । सौराहामा बाघको आक्रमणमा परी एक महिलाको ज्यान गएपछि सौराहा सेक्टर कार्यालयमा भएको तोडफोडको विषय पनि टोलीको कार्यादेशमा थियो । असार पहिलो साता रत्ननगर–५ मगर टोलकी ३२ वर्षीया गीता अधिकारीलाई घर आडको जनकौली मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा निउरो टिप्न गएका बेला बाघले आक्रमण गरेको थियो ।
त्यो बेला घटनास्थलनजिकै रहेको रहेको सेनाले उद्धार गर्न तत्परता नदेखाएकाले प्रहरी बोलाउनुपरेको भन्दै स्थानीयहरूले सौराहास्थित निकुञ्जको पूर्वी सेक्टर कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए । स्थानीयहरूले उद्धार गर्ने कार्यमा बरालले निर्देशन नदिँदा महिलाको ज्यानै गएको आरोप लगाएका थिए । त्यो विषयमा टोलीले चासो राखेको थियो । ‘घटनाको ४ घण्टापछि प्राविधिकले बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको देखियो,’ टोली स्रोतले भन्यो, ‘निकुञ्जसँग चिढिएका र विभिन्न समयमा कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरूले निकुञ्ज कार्यालय तोडफोड गर्नुका साथै अनर्गल आरोपसमेत लगाएको देखियो ।’ वार्डेन बरालले पनि घटना भएको ४५ मिनेटभित्रै हात्तीसहितको टोली घटनास्थल पुगेको दाबी गरेका थिए । छानबिन टोलीमा मन्त्रालयका कानुन उपसचिव रामजी दनाई, निकुञ्ज विभागका उपसचिव वेदकुमार ढकाल, महासेनानी (कर्णेल) अच्युतम भण्डारी सदस्य छन् ।
प्रकाशित : श्रावण १०, २०७८ ०८:१४